सचेत हुनुस्, यी हुन् हृदयघात हुन सक्ने ६ लक्षण
काठमाडौं — धेरै मानिसको मुटुरोगका कारण मृत्यु हुन्छ । आजकल त युवा अवस्थामै मुटुरोग वा हृदयघात भएर मर्ने व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ ।
तर हृदयघात हुँदैछ भनी सचेत गराउने संकेतहरू शरीरले पहिल्यै दिन्छ । हुन त सबैलाई यस्तो संकेत आउँछ भन्ने छैन तैपनि शरीरले कुनै न कुनै किसिमको संकेत भने दिन्छ ।
त्यसैले मुटुरोगबाट बच्नका लागि सचेत हुनु जरूरी छ । यहाँ दिइएकामध्ये कुनै पनि लक्षण देखिएमा तत्काल चिकित्सकको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ थकित हुनु त सामान्य हो । बेस्सरी काम गर्ने सबैलाई थकान त लागिहाल्छ । तर ससानो काम गर्दा पनि थकाइ लाग्न थाल्यो भने बुझ्नुस्, मुटुलाई दबाब पर्दैछ । मुटुले पर्याप्त मात्रामा रगत पाइरहेको छैन र हृदयघात हुन सक्छ भन्ने लक्षण हो यो ।
२ छातीमा दबाब
छाती बाउँडिएर आउनु भनेको हृदयघातको चेतावनी हो । मुटु बेस्सरी धड्किने र छाती, पिठ्युँ, दाह्रा, घाँटी, पाखुरा वा माथिल्लो पेट दुख्ने गरेमा पनि हृदयघात हुन सक्छ ।
३ सास फेर्न अप्ठेरो
सास फेर्न गाह्रो हुनु भनेको तपाईंको फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन नपुगेको हो र धमनी ब्लक भएको संकेत हो । सास फेर्न गाह्रो हुने काम नियमित भइरह्यो भने खतराको घन्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
तपाईं कमजोर र ऊर्जाहीन महसूस गरिरहनुभएको छ भने तपाईंका मांसपेशीले पर्याप्त अक्सिजन नपाएको लक्षण हो । हृदयघातको पहिलो चेतावनी हो यो ।
५ चक्कर र चिसो पसिना
यस्तो लक्षण देखियो भने तत्कालै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । बेस्सरी पसिना चुहिनु हृदयघातको प्राथमिक लक्षण हो र दिमागमा अक्सिजन नपुग्दा यस्तो हुन जान्छ ।
६ रुघा र ज्वरो
जाडोमा रुघा लाग्नु र ज्वरो फुट्नु स्वाभाविक हो । तर धेरै मान्छेलाई हृदयघातको एक महिनाअघि यस्ता लक्षण देखिन्छन् भन्ने थाहै छैन । खोक्दा शरीरको रक्तसञ्चार सहज हुन्छ ।
मुटुरोगबाट बच्नका लागि सात्विक आहार गर्ने, चुरोट नपिउने, रक्सी नपिउने, पर्याप्त सुत्ने र नियमित अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ । साथसाथै चिन्ता र तनाव नलिने गर्नुभयो भने पनि हृदयघात हुँदैन ।
असार २५, २०७५ मा प्रकाशित
परेला कम झिम्क्याउनुहुन्छ भने खतरनाक रोगको संकेत
मुस्लिम बस्तीमा पखाला : घरघरै बिरामी, उपचारका लागि ठाउँ अभाव
ऋतु अनुसार कुन मौसममा के खानेकुरा खाने ?
धनगढीमा साल्ट ट्रेडिङ र व्यापारीबीचको विवाद उत्कर्षमा धनगढी – साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेसन लिमिटेड अञ्चल कार्यालय धनगढी र व्यापारीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वर्षौदेखि साल्ट ट्रेडिङको १८ सटरमा भाडा लिई व्यापार गर्दै आएका व्यापारी र साल्...
शेयर बजार लयमा : नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो, अर्ब बढीको कारोवार
मलेसियामा सरकारले नै कामदार पठाउने गृहकार्य, नेपाली टोली बुधवार मलेसिया जाने
पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी निर्माण गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
इराकमा तीनपटक बेचिएकी चेलीको दर्दनाक व्यथा: ‘मरिस् भने फाल्ने ठाउँ यहीँ छ भनेर धम्क्याउँथे’
- लोकान्तर सम्पादकीय पूरा पढ्नुहोस
कर्णाली सरकारको परीक्षा : ७ महिनामा ६० अंक, विज्ञ समूहले गराउँछ क्रमभंग !
कर्मचारी अवकाशको उमेर हद : ५८ बाट बढाउने तर लागू तीन वर्षपछि मात्र